Social Media na-akwụ ụgwọ dị ka Fortune CMOs si dị
The Nyocha CMO nakọtara ma kesaa echiche nke ndị na-ere ahịa kachasị elu iji kwupụta ọdịnihu nke ahịa, soro usoro azụmaahịa kacha mma, ma melite uru ahịa na ụlọ ọrụ na ọha mmadụ.
A isi slide, nke Onye njem ala ahia rụtụrụ aka, bụ na-atụ anya na-elekọta mmadụ media expenditures… agbanwe agbanwe ibu na-akwado siri ike n'ime nnyocha e mere.
Tọrọ ntọala na August 2008, The Nyocha CMO a na-eme nnyocha ugboro abụọ n’afọ site na nyocha Intanet. Ajuju na-emeghachi oge na-aga ka e wee nwee ike ịchọpụta ihe na-ewu ewu. A na-ewebata isiokwu pụrụ iche maka nyocha ọ bụla - Nke a bụ nchịkwa 6th.
Tags: 2011nyocha cmoelekọta mmadụ mediaelekọta mmadụ media emefu